केपी ओलीसँग एकता गरेर मैले ज्ञान प्राप्त गरेँ : प्रचण्ड - Baikalpikkhabar
२७ भाद्र, काठमाडौँ/ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरेर ज्ञान प्राप्त गरेको बताएका छन् ।
आइतबार पार्टीका केन्द्रीय सदस्य परशुराम तामाङको ‘नेपाली कम्युनिस्टको कार्यदिशा’ पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले त्यो ज्ञान ओलीसँग पार्टी एकता गरेपछि मात्रै प्राप्त हुने भन्दै व्यंग्य गरे ।
‘अस्ति पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा मलाई ताकेर सोध्नुभयो, के पाउनुभयो केपी ओलीसँग पार्टी एकता गरेर ?, ‘ उनले सुनाए, ‘के पाएँ भन्न त विभिन्न उतारचढाव छन् । चार पाँच घण्टा लाग्छ । तर, मैले ज्ञान प्राप्त गरेर आएँ,’ उनले भने ।
प्रचण्डले आफू कम्युनिस्ट आन्दोलनको पाठशाला भएको दाबी गर्दै आफ्नो अनुभवबाट सिक्न आह्वान गरे । ‘सिक्ने कि गाली गर्ने हो । किन सिध्याइदिने भन्ने हो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभव हो ठिक ढंगले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने हो । हामीबाट तपाईंहरू केही सिक्नुस्,’ उनले भने ।
पेरुका नेता गोञ्जागोको निधनसँगै क्रान्तिको एउटा मोडेल अन्त्य भएको प्रचण्डले बताए । गोञ्जागोको रिहाइको निम्ति नेपालका कम्युनिस्टले पहल गरेको तर त्यसको प्रभाव रिहाईको स्तरमा नपुगेको बताए ।
उनले अहिले संसारमै विचार र राजनीतिको समस्या, नयाँ वैचारिक संश्लेषणको समस्या देखिएको भन्दै विचार र राजनीतिको क्षेत्रमा आजका चुनौतीहरुको सामना गर्नेगरी सुव्यवस्थित वस्तुवादी वैज्ञानिक संश्लेषण आवश्यक रहेको बताए ।
‘वैचारिक राजनीतिक संश्लेषणको आवश्यकता नेपाली राजनीतिक पार्टीमा पनि छ । हाम्रो पार्टीले अभियान सुरू गरेको छ । अध्ययन अनुसन्धान बहसको प्रक्रियाबाट अघि बढेर नयाँ संश्लेषणमा पुग्ने काममा लागेका छौं,’ उनले भने ।
पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा आहुती लगायत टिप्पणीकारले माओवादी र प्रचण्डको नाम नलिएकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘नाम लिन पनि किन अफ्ठेरो ? यो स्तरको आग्रह पूर्वाग्रह कुण्ठा के हो यो ? इतिहासको कुरा नभन्ने ?’ प्रचण्डले गुनासो गरे ।
आइतबार, २७ भदौ, २०७८, रातीको ०९:०० बजे